सित्तैमा खाना खाने लोभमा पनि महिला डेटिङ जान्छन् ? अध्ययनले यस्तो देखायो – All top Here
Home/मनोरंजन/सित्तैमा खाना खाने लोभमा पनि महिला डेटिङ जान्छन् ? अध्ययनले यस्तो देखायो
सित्तैमा खाना खाने लोभमा पनि महिला डेटिङ जान्छन् ? अध्ययनले यस्तो देखायो
एजेन्सी- आम रुपमा महिलाहरु पुरुषसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छन् । कुनै पनि पुरुषसँग नजिक हुँदै गरेकी महिलाको चाहना रोमान्स वा लामो सम्बन्ध स्थापित गर्ने नै हुन्छ । तर, अध्ययनले के देखाएको छ भने सबै महिला रोमान्स वा जीवन साथीको रुपमा मात्रै पुरुषलाई स्वीकार गर्छन् भन्ने हुँदैन ।
हरेक चार जना महिलामध्ये एक जना महिला भने रोमान्स वा लामो सम्बन्धभन्दा पनि सित्तैमा विभिन्न परिकार खान पाइन्छ भन्ने लोभमा पुरुषसँग नजिक हुने र डेटमा जाने गरेको पाइएको छ ।
अजुसा प्यासिफिक युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया–मेरेडको एक अध्ययनले सित्तैमा खाना खानकै लागि केही महिला डेटमा जाने गरेको तथ्य पत्ता लागेको हो । वैज्ञानिककाअनुसार यो अवस्थालाई ‘फुडी कल’ भनिन्छ । जहाँ महिला डेटिङको समयमा खानाको स्वाद लिन चाहन्छन् ।
३३ प्रतिशत महिलाबाट स्वीकार
कतिपटक यस्तो डेटमा जान्छन् ?
महिलाहरुलाई खाना खाने मात्रै उद्देश्यले डेट जानु भएको छ ? भनेर सोधिएको थियो । यस क्रममा गएकी छु भन्नेहरुलाई कतिपटक जानु भएको छ भनेर पनि सोधिएको थियो । यसको जवाफमा रेटिङमार्फत उनीहरुको उत्तर खोजिएको थियो ।
१ देखि ६ सम्मको रेटिङ थिइएको थियो । १ रेटिङ दिनेको अर्थ हुन्थ्यो, उ कहिले पनि यस्तो डेटमा गएकी छैन । तर १ बाहेक ६ नम्बरसम्मको रेटिङ दिनेहरु भने कहिलेकाही जाने गरेको भन्ने बुझाउँथ्यो । यस्तै सोसल साइकोलोजिकल एण्ड पर्सनालिटी साइन्स जर्नलमा प्रकाशित शोधअनुसार ‘फुडी कल’ को अवस्था थुप्रै किसिमको सम्बन्धमा देखिएको थियो ।
भुल्न नसकिने ‘पुरानो नेपाल’, हेर्नुस् ६५ बर्ष पहिलेको नेपाल ( १० तस्विरहरू)
कलाकार दीपक क्षेत्री र केशव भट्टराईलाई श्रद्धाञ्जलि दिन पुगेका कलाकारहरु र परिवारको रुवाबासी (भिडियो)
शान्ती सेनामा मिसन गएका आर्मिको श्रीमती पुलिस ले भगाएपछी एअरपोर्टमै श्रीमती ता’ना’तान